The Essence: (B.P.U)တက္ကသိုလ်( သီရိလင်္ကာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် မြန်မာသံဃာတော် အများစုတက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေသော တက္ကသိုလ်ကြီးလေး ခု ရှိပါသည်၊၊ ထိုတက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ ကေလနိယတက္ကသိုလ်၊ ပေရာဒနိယတက္ကသိုလ်၊ ကိုလမ်ဘို တက္ကသိုလ်နှင့်၊ (B.P.U)တက္ကသိုလ်တို့ ဖြစ်ပါသည်၊၊
တက္ကသိုလ်လေးခုဟုဆိုသော်လည်း ကေလနိယတက္ကသိုလ်နှင့်(B.P.U) တက္ကသိုလ်နှစ်ခုတွင် အများဆုံးတက်ရောက်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်၊၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်တွင် နှစ်စဉ်မြန်မာကျောင်းသား (၈၀) ခန့်တက်ရောက်ကြပြီး၊ (B.P.U)တက္ကသိုလ်တွင် နှစ်စဉ်မြန်မာကျောင်းသား(၅၀)ခန့် တက်ရောက်ပညာသင်ယူကြပါသည်၊၊
ကေလနိယတက္ကသိုလ်ကြီး အကြောင်းကို မြန်မာကျောင်းသားတော်တော်များများ သိကြပြီးဖြစ်သော်လည်း (B.P.U)တက္ကသိုလ်ကြီး အကြောင်းကိုသိသောမြန်မာပြည်မှ ညီတော် နောင်တော်များ တော်တော်နည်းနေ သေးသည်ကို သတိပြုမိပါသည်၊၊
မြန်မာပြည်မှ သီရိလင်္ကာသို့ လာရောက်ပညာသင်ကြားလိုကြသော ညီတော်နောင်တော်များအတွက်(B.P.U) တက္ကသိုလ်ကြီးအကြောင်းဆောင်းပါးကို မိမိရေးသားလိုက်ပါသည်၊၊(B.P.U) တက္ကသိုလ်ကြီး၏ အရှည်စာလုံး ပေါင်းမှာ (BUDDHIST AND PALI UNIVERSITY OF SRI LANKA)ဟု ဖြစ်ပါသည်၊၊
(B.P.U)တက္ကသိုလ်ကြီးကို(22.4.1982)ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်၊၊ B.P.U)တက္ကသိုလ် တည်ရှိသော နေရာမှာ ကိုလမ်ဘိုမြို့တော်နှင့်(28) ကီလိုမီတာကွာဝေးသော (Pitipana Village, Homagama Township) တွင်ဖြစ်သည်၊၊ ဝေါပိုလာရာဟုလာသည် ဤတက္ကသိုလ်ကြီးကို ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်သော်လည်း အားလုံး ပြီးသွားသောအခါ တပည့်ဖြစ်သူ Kakkapalliye Anuruddha Nayaka Thera အား တက္ကသိုလ်၏ Chancellor တာဝန်ထမ်းဆောင်စေပြီး၊ ဆရာတော်ကမူ ပြင်ပမှပင် စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသည်၊၊
တက္ကသိုလ်ကြီးကို ဖွင့်လှစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ သီရိလင်္ကာသံဃာတော်များအတွက် (Traditional Education) မှ (Modern Educations) ပုံစံသစ်တခုကို ပုံဖော်ရန်ဖြစ်သည်၊၊ လူဦးရေသန်း (၂၀) ကျော်ကျော် လေးမျှသာ ရှိသော သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီတက္ကသိုလ်ကြီး (၁၅) အထိရှိပါသည်၊၊ ကောလိပ်ကျောင်းများမှာ များစွာပင်ရှိပါသည်၊၊
ထိုတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် လေ့လာရန်နယ်ပယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းသော ပါဠိစာပေကို Departmentတစ်ခု၊ ဌာန တစ်ခုတည်းဖြင့် သင်ကြားလေ့လာနေရသည်ကို လုံလောက်မှုမရှိသေးကြောင်း သီရိလင်္ကာ ပညာရှင်အများက သတိပြုလာကြပါသည်၊၊ ထို့ကြောင့်ပင် ကိုလမ်ဘိုမြို့တော်နှင့် ကီလိုမီတာ်(206)ဝေးသော အနုရာဒပူရမြို့ ဟောင်းတွင် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တခုကို တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပိဋကတ်စာပေကို လေ့လာသင်ကြားခဲ့ကြပါသည်၊၊ နာမည်မှာ “ဗုဒ္ဓသာဝကတက္ကသိုလ်”ဟူ၍ ဖြစ်သည်၊၊
တက္ကသိုလ်အသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း လိုအပ်သော ပါဠိစာပေကို အဆင့်မြင့်မြင့် လေ့လာသင် ကြားတတ်မြောက်ရေးနှင့်၊ ပါဠိစာပေကမ္ဘာသို့ ပြန့်ပွားရေးကိုကား များစွာအထောက်ကူ မပြုခဲ့ပါ၊၊ အကြောင်းမှာ အနုရာဒပူရတက္ကသိုလ်တွင် အသုံးပြုသော Language Medium မှာ သီရိလင်္ကာ ဘာသာဖြင့် သင်ကြားသော တက္ကသိုလ်ဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်၊၊
ထို့ကြောင့် အနုရာဒပူရတက္ကသိုလ်ကို English Medium အဖြစ်ပြောင်းလွှဲရန် တက္ကသိုလ်ကြီးအတွင်း စည်း ဝေးပွဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ကြခဲ့ပါ၊၊ အကြောင်းမှာပါဠိစာပေတခုတည်းကိုသာမြင့်မြတ်သော အရိယဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်စာပေနှင့် အခြားစာပေများကို ယုပ်နိမ့်သော တိစ္ဆာနကထာဖြစ်သည်ဟု အစွဲကြီးလှ သော သီဟဠဆရာတော်ကြီးအချို့၏ တယူသန်အစွဲကြောင့် ဖြစ်သည်၊၊
အစွဲအလန်းကြီးသော သီရိလင်္ကာဆရာတော်ကြီးအချို့၏လက်ထဲတွင်ရောက်ရှိနေသော သီရိလင်္ကာ သံဃာ့ပညာရေးသည် မိရိုးဖလာ (ပါဠိ+သီဟဠ) အဖြစ်မှ ခေါင်းမမော့နိုင် မတက်နိုင်ဘဲ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာ လာခဲ့ပါသည်၊၊ ပညာရေးပုံစံသစ်တခုကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အခက်ခဲများစွာရှိကြောင်း အထောက်ထားတခု ပင် ဖြစ်သည်၊၊
အင်္ဂလိပ်စာနှင့်၊ ခေတ်သိပ္ပံပညာရပ်များကို “တိရစ္ဆာန၀ိဇ္ဇာ”အတတ်များဟု ဆရာတော်ကြီးအချို့၏ ဖိနှိပ်မှုကြား မှပင် ခေတ်ပညာကို ကျားကုပ်ကျားခဲ ကျိုးစားတတ်မြောက်လာသော ရဟန်းငယ်များစွာ ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါသည်၊၊ ထိုရဟန်းငယ်များအထဲတွင် ဝေါပိုလာရွယ်ငယ်လေးမှ “အရှင်ရာဟုလာ”သည် တစ်ပါးအပါအ၀င် ဖြစ်သည်၊၊
အရှင်သည် ခေတ်ပညာများကို သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီး (20) ရာစု သီရိလင်္ကာ၏ အထင်ရှားဆုံးနှင့်၊ အတော် ဆုံးပညာရှင် ဖြစ်လာပါသည်၊၊ ဝေါပိုလာရာဟုလာသည် ခေတ်သစ် B.A, M.A, Ph. D ဘွဲ့များရသည်အထိ ခေတ်ပညာရပ်များကို သင်ကြားခဲ့ပါသည်၊၊ (1982)နှစ်တွင် ဝေါပိုလာရာဟုလာသည် Buddhist and Pali University of Sri Lanka(B.P.U) ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်၊၊
တက္ကသိုလ်ကြီးသည် English Language Medium ဖြစ်သည်၊၊ သီရိလင်္ကာသံဃာ့ Traditional Education မှ Modern Education အဖြစ်သို့ အသွင် ပြောင်းလွှဲပေးသော Modern Educational Pioneer အဖြစ် ဝေါပိုလာရာဟုလာကို သီရိလင်္ကာသံဃာတရပ် လုံးက အသိမှတ်ပြုခဲ့ကြပါသည်၊၊
ဝေါပိုလာရာဟုလာတည်ထောင်သော ထိုတက္ကသိုလ်ကြီး၏အမည်ကို Buddhist and Pali University of Sri Lanka (B.P.U) ဟုအမည်တပ်ခဲ့ပါသည်၊၊ ယ္ခုအခါ(B.P.U) တက္ကသိုလ်ကြီးသည် နှစ်သက်တမ်း (28) နှစ်သက် တမ်းသို့ ချည်းနင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်၊၊ တည်ထောင်စတွင် ပါဠိ+အင်္ဂလိပ် Certificate တမ်းမှ စတင်ခဲ့ သော ဤတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ယ္ခုအချိန်တွင်(B.A, M.A, M.Phil, Ph. D) တန်းများအထိ သင်ကြားလျှက်ရှိပေပြီ၊၊
(B.P.U)တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် (Mediums) သုံးမျိုးအထိ ကျောင်းသားတဦးသည် စိတ်ကြိုက်ယူခွင့် ရှိပါသည်၊၊ English medium, Sinhalese medium, Korea medium တို့ဖြစ်ပါသည်၊၊ (B.P.U)တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် Main Departmentsကြီးနှစ်ခုရှိပါသည်-
(1) Faculty of Buddhist Study နှင့်
(2) Faculty of Language တို့ဖြစ်ပါသည်၊၊
Faculty of Buddhist Study တွင်
(1) Buddhist Philosophy
(2) Inter religious and comparative Philosophy
(3) Buddhist Culture
(4) Buddhist Arts and Archaeology
(5) Buddhist Cosmology
(6) Buddhist Epistemology
(7) Buddhist Ethics
(8) Buddhist Psychology
(9) Buddhist Aesthetics
(11) Buddhist Legal Philosophy
(12)Buddhist Social Philosophy
(14) History of Buddhism တို့ကိုနှစ်သက်ရာရွေးချယ်၍ သင်ယူနိုင်ပါသည်၊၊
Faculty of Language- တွင်
(2) Sinhala Language and Literature
(4) Sanskrit Language and Literature
(5) Korean Language and Literature တို့ကိုနှစ်သက်ရာရွေးချယ်၍ သင်ယူနိုင်ပါသည်၊၊
(B.P.U)တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် အတန်း(6)မျိုးကို ဤတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနိုင်ပါသည်၊၊
(1) B.A Diploma class (one year)
(2) B.A degree class (three years)
(3) M.A Diploma class (one year)
(4) M.A Degree class (one year)
(5) M.Phil (two years)
(6) Ph.D (three years) တို့ဖြစ်ပါသည်၊၊
B.A Diploma Class one year အတွက် ကျောင်းဝင်ကျေးမှာ နိုင်ငံခြားသားအတွက် US ဒေါ်လာ (100)ဖြစ်သည်၊၊ B.A Degree Class three years အတွက် စုစုပေါင်း US ဒေါ်လာ(500)ဖြစ်ပါသည်၊၊ M.A Diploma Class one year အတွက် US ဒေါ်လာ(100)ဖြစ်ပါသည်၊၊ M.A Degree Class one year အတွက် US ဒေါ်လာ (100)ဖြစ်သည်၊၊ M.Phil two years အတွက် သီရိလင်္ကာရူပီး(27000)ဖြစ်ပါသည်၊၊ Ph.D three years အတွက် သီရိလင်္ကာရူပီး(42000)ခန့်ဖြစ်သည်၊၊
နှစ်စဉ် January လတွင် ကျောင်းသားသစ်များကို လက်ခံပါသည်၊၊ မြန်မာပြည်မှလာရောက် ကျောင်း တက် လိုသော ကျောင်းသားတဦးသည် ဤတက္ကသိုလ် Register ဌာနတွင် ဓမ္မာစရိယမူရင်းနှင့် English Translation (သို့မဟုက်)မထမကြီး အောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် English Translation တခုခုကို ပြသရပါသည်၊၊
ယ္ခင်ကမြန်မာကျောင်းသားများအတွက် ဤအောင်လက်မှတ်နှစ်မျိုးတည်းကိုသာ လက်ခံသော (B.P.U) တက္က သိုလ်သည် ယ္ခုအခါ (2007)ခုနှစ် ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်တွင်ကျဉ်းပခဲ့သော ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကြီး များ စည်းဝေးပွဲ (International Association of Buddhist Universities (IABU)၏ အကျိုးသက်ရောက် မှုဖြင့် မြန်မာပြည်တက္ကသိုလ်ငါးခုမှ ဘွဲ့လက်မှတ်များကိုပါ လက်ခံနေပြီ ဖြစ်သည်၊၊ ၄င်းဘွဲ့လက်မှတ်များမှာ---
(1) ရန်ကုန်သာသနာ့တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်၊
(2) မန္တလေးသာသနာ့တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်၊
(3) ထေရာဝါဒကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်၊
(4) သီတဂူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်၊
(5)ဆရာကြီး ဦးမြင့်ဆွေ တည်ထောင်သော ရန်ကုန်/မန္တလေး ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်တို့ဖြစ်ပါသည်၊၊
(မှတ်ချက်/ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ အခြားတက္ကသိုလ်များတွင်လည်း ဤဘွဲ့ငါးမျိုးလုံးကို လက္ခံနေပြီ ဖြစ်ပါသည်)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ Systems နှင့် မြန်မာပြည် Buddhist Universities များ၏ Systems မှာများ စွာကွာခြားပါသည်၊၊ သီရိလင်္ကာတက္ကသိုလ်များတွင် အတန်းတိုင်းအတွက် (Subjects) များစွာထားရှိပါသည်၊၊ ထိုအထဲကမှ မိမိနှစ်သက်ရာဘာသာရပ် ရှစ်ခုခန့်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ကျောင်းသားအနေဖြင့် တက် ရောက် ရခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ စာမေးပွဲဖြေသောအခါတွင်လည်း အတန်းအလိုက် လုံးဝကျရှုံးသည်ဟူ၍မရှိပါ၊ အောင်မြင်သော ဘာသာကို Result Paper တွင်ကြေငြာပြီး၊ အောင်မှတ်မမှီသော ဘာသာရပ်ကို ဂေဇတ်တွင် ထည့်မကြေငြာဘဲ ချန်ထားခဲ့ပါသည်၊၊ ထုိုဘာသာကို နောင်နှစ်တွင် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ်စသည်တို့နှင့်အတူ ထပ်မံ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
တချို့ကျောင်းသားများမှာ သုံးနှစ်ပြည့်၍ (B.A) တန်းပြီးသွားသည့်တိုင် လက်ကျန်ဘာသာရပ်များစွာ ကျန်နေ တတ်ပါသည်၊၊ ထိုကျန်နေသော ဘာသာရပ်အားလုံးအတွက် နောက်ထပ်(၂)နှစ်ထပ်ပြီး အခွင့်ရေးပေးထား ပါသည်၊၊ ကျောင်းသားအနေဖြင့် ဘီအေတန်းကို (၅)နှစ်အတွင်းဘာသာရပ်အားလုံး ပြီးပြတ်အောင် ဖြေဆိုရ မည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
ငါးနှစ်နှစ်ပြည့်သည့်တိုင် ဘာသာရပ်အားလုံး ပြီးဆုံးအောင် မဖြေဆိုနိုင်သော ကျောင်းသား အား တက္ကသိုလ်မှ အလိုလျောက်ပယ်လိုက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်၊၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘီအေတန်းပြီးသွားသော်လည်း ဘီအေဘွဲ့လက်မှတ် မရဟုဖြစ်ပါသည်၊၊ ဤစနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ပညာရေးပုံစံနှင့်မတူသော သီရိလင်္ကာပညာ ရေး စနှစ်တခုဖြစ်ပါသည်၊၊
မြန်မာပြည်မှ သီရိလင်္ကာသို့ကြွရောက်၍ ကျောင်းတက်လိုသော ညီတော် နောင်တော်များအတွက် ဤဆောင်းပါးကို ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ လုံးဝပြည့်စုံသည်ဟုကား မဆိုနိုင်သေးပါ၊၊ ညီတော် နောင်တော်များ စိတ်ရှည် ဇွဲသန် သည်းညည်းခံ သတ္တိရှိရှိဖြင့်၊ သီရိလင်္ကာကို ကြွရောက် ပညာသင်တော်မူကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ရင်း တပည့်တော်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါသည်၊၊
( 3.6.2010 )
Posted by အလင်း စက် at 8:04 AM